Andramena avy any Malezia- Sinoa iray namoahan’ny Fitsarana didy fampisamborana - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Andramena avy any Malezia- Sinoa iray namoahan’ny Fitsarana didy fampisamborana
Kaontenera valo feno andramena no tafaverina tao Toamasina ny volana jona sy jolay teo
Namoahan’ny mpitsara zokiolona didy fampi- samborana ireo rehetra tsy vita fanadihadiana, kanefa tokony nofotorana tamin’ilay raharaha fanondranana andramena 12 kaontenera tany Sina, ka nahatafaverenana kaontenera valo tao amin’ ny seranan-tsambon’
i Toamasina, ny volana jona sy jolay lasa teo.
Tafiditra ao anatin’ireo olona namoahan’ny Fitsarana baiko fampi- samborana amin’izany ilay metisy sinoa fantatra fa tompon’ireo andramena ireo. Efa mpiray petsapetsa tamin’ny fanondranana ilay andramena enina kaontenera tra-tehaka tao Nosy Maorisy izy izao voasaringotra amin’ny fanondranana andramena 12 kaontenera izao indray. Mbola tsy eto Madagasikara anefa izy raha ny vaovao farany azo.
Ity metisy sinoa ity nitory ny sambo nitatitra ireto kaontenera tao Hong-kong, ny 24 jona lasa teo, no nahafantarana fa izy no tompon’ireo andramena haondrana any Sina ireo. Tsy tonga ara-potoana tao Hong-kong mantsy ireo kaontenera ireo noho izy ireo efa naverina tetsy amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina.
Olona enina nahitana tompon’andraikitra tao anatin’ny faritra fanatobiana kaontenera ao anatin’ny seranan-tsambon’i Toamasina, izay niaingan’ ireo kaontenera 12 ireo ary mpiasan’ny sambo nitatitra ireo kaontenera no fantatra fa efa naiditra am-ponja vonjimaika mahakasika ity raharaha ity. Mbola tsy nahazo ny taratasy manome alalana azy hanohy ny famotorana ny eo anivon’ny Fadintseranana hatreto. Efa misisika ny hanao ny fanadihadiana ihany koa anefa ny eo anivon’ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny Ala
Hanitry Ny Aina
Fambolena sy fiompiana – «Tokony ho sompitry ny Ranomasimbe Indianina isika», hoy ny Fivmpama Iankinan’ny ho avin’ny firenena. Notanterahina omaly ary hitohy anio, etsy amin’ ny tokotany malalaky ny Tour Zital, Ankorondrano ny «zaikabe ho an’ny fandraharahana eo amin’ ny sehatry ny fambolena sy fiompiana», karakarain’ ny Fivondronan’ny Mpan- draharaha Malagasy na ny Fivmpama. « Ny fahatsapana ny tsy fisian’ny firindrana sy ny fitrandrahana, araka ny tokony ho izy, ny harena avy amin’ny fambolena sy ny fiompiana misy eto amintsika
Fikarohana – Nampahafantarina ny karazam-bary vaovao ho an’ny sakafo mahasalama Tontosa omaly, tetsy amin’ny Hotel Colbert Antani- narenina, ny atrikasa tao anatin’ilay tetikasa fitaratra «voly vary, ho an’ny sakafo ara-pahasalamana». Nisy ny andrana karazam-bary vaovao izay natao tany Anjepy – Manjakandriana, ny volana oktobra 2012, vokatry ny fiaraha-miasan’ ny orinasa Nestlé sy ny ivon-toeram-pikarohana ho an’ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra, ny foibe fikarohana momba ny fambolena (FOFIFA), ny ivon-toeram-pikarohan’ ny Nestlé, any Abidjan (Côte d’Ivoire) ary ireo sekoly ambony samihafa.
Fitrandrahana – Nohamafisina ny sazin’ny Mainland fa tsy mbola vita ny RN5 Mihasimba! Tsy misy fivoarana ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena faha-5 mampitohy an’i Toamasina sy Fenoarivo Atsinanana, sahanin’ny kaompania mpitrandraka Mainland ary ao anatin’ny fifanarahany amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany. «Misy fahatarana be ny asa, satria efa hatramin’ny 4 avrily no niato izany. Vao mainka mitombo ny fahasimbana, na dia efa nisy ampahan-dalana sasantsasany nasiam-panam- boarana aza», araka
Fandraharahana ara-bola madinika – Mitaraina amin’ny hetra sy ny sara alain’ny banky ireo mpandraharaha Manakaiky kokoa ireo olona any ambanivohitra ary manampy azy ireo amin’ny fitantanana ny vola sy amin’ny fanatsarana ny fiainany ireo mpandraharaha amin’ny fampindramam-bola madinika. Misedra olana anefa ankehitriny ity sehatra ity satria mitairana amin’ny hetra sy ny sarany alain’ ireo fandraharahana goavana. “Tsy maintsy any amin’ ireo sehatra ambony ireo mantsy no ametrahana ny volan’ireo mpandraharaha ara-bola madinika araka ny lalàna misy”,
Hetsika bazar chic – Nosembanin-drahon’ny korontana tamin’ny tolotra tabilety Niteraka filaharam-be. Nanamarika ny andiany voalohany tamin’ny hetsika Bazar Chic, tante­rahina etsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena etsy Mahamasina, nanomboka omaly ka haharitra hatramin’ ny alahady izao, ny fifandrombahana mba hahazoana ny tabilety na tabbee natolotry ny Orange. Io no azo lazaina fa nanamaloka kely ny andro omaly (Ndlr: vakio lahatsoratra pejy faha-2). Ankoatra ity tolotra ity, karazam-bokatra samihafa ihany koa no hita amin’ity Bazar chic ity, izay ahitana tranoheva 250 miaraka amin’ny fihenam-bidy 15% fara fahakeliny. Vao mangiran-dratsy dia efa nisy nilahatra mba hahazo ity tabilety natolotr’io orinasa mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny fifandraisana io, satria namidy Ar 49 000 ilay fitaovana niaraka tamin’ny fahana «internet» tao anatiny. Nohazavain’Andrianasolo Njaka, Tale Jeneralin’ny FIMA FM (Finance Management for Madagascar) mpikarakara ny hetsika anefa fa misy ny fepetra amin’ny fahazoan’ny mpanjifa an’izany tolotra izany. Nampiakatra ny isan’ny mpanjifa dika mitovy (photocopie) teny amin’ny manodidina an’i Mahamasina io hetsika tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy fanatanjahantena io. Isan’ny notakiana tamin’ireo mpanjifa mantsy ny dika mitovin’ny karapanondrom-pirenena Tafakatra Ar 200, raha Ar 100 amin’ny mahazatra, ny saran’ny dika mitovy. Faly Ran.
Andramena, Mpanoratra Rijakely, 07.08.2012, 09:31	FIARAHAMONINA
Herinandron’ny ati-vava – Mety hahafaty ireo ankizy madinika ny areti-nify Fanadinana BEPC – Hanomboka amin’ny 27 mey ny adina ara-panatanjahantena Fifamoivoizana an-drenivohitra – Taratasina fiara miisa 500 nogiazana tao anatin’ny 45 andro Fetin’ny Pantekosta – Ho tsara sady hafana ny faran’ny herinandro Hijery hafa
Vu d’ailleurs	Lahatsoratra vaovao	JK groupe – «Tsy mbola nisy ny fitarainana momba ny Power Balance»
Coliseum Antsonjombe – Hanohy ny seho ry Black Nadia, Jean-Aimé, Tsiliva ary D’Alvis
« Batou beach » – Hiray sehatra i Lalatiana sy Eric Manana
Fiaraha-mitantana telo loha – Tsy mbola nankatoavin’ ny governemanta ilay volavolan-dalàna